Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Famporisihana Ny Tanora Ho Amin’ny Ampitso Tonga Lafatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Septambra 2011 8:31 GMT 1	 · Mpanoratra Salman Latif Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Pakistana, Fanabeazana, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
I Pakistana no anisan'ny manana isan-jatonà mponina tanora avo indrindra manerana izao tontolo izao, novinavinaina ho 63% eo . Araka ny tatitry ny Kaonsily Britanika ‘The Next Generation’  na ny ‘Ny Taranaka Manaraka’ dia tsy hitsaha-hitombo io isan-jato io hatramin'ny taona 2045, ao aorian'izay ny isan-jaton'ireo olon-dehibe dia hihoatra ny an'ireo tanora. Manana tombon-dahiny azo araraotina i Pakistan noho izany, amin'ny alalan'ireo tanorany. Ny fanontaniana mipetraka dia mety hitondra tombon-tsoa ve sa ho loza ny fahatanoran'ny mponina. Varavarankely iray ho an’ i Pakistan izany tombon-dahiny izany hiotazana tombontsoa ara-tsôsialy sy toe-karena izay miankina amin'ny taranaka tanorany.
Manomana hesika samy hafa  matetika ny IPSS natao manokana ho an'ireo tanora. Tafiditra ao anatin'izany ireo takarivam-pikoranana ataon'ny Open Mic isan-kerinandro, fijerena ireo horonan-tsary sy famakiam-boky, ary ireo hatrik'asa ho an'ny adihevitr'ireo manam-pahaizana…..Matetika no manomana hetsika samihafa  natao manokana ho an'ny tanora ny IPSS. Tafiditra ao anatin'izany ireo takarivam-pikoranana ataon'ny Open Mic isan-kerinandro (Fandraisana Fitenenena Malalaka), fijerena horonantsary sy famakiana boky, ary ireo atrikasa ho aminà adihevitr'ireo manam-pahaizana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/14/22253/
 Ny Ivon-toeram-pianarana Fandriampahalemana sy Laika : http://www.peaceandsecularstudies.org/
 novinavinaina ho 63% eo: http://undp.org.pk/undp-and-the-youth.html
 hesika samy hafa: http://peaceandsecularstudies.org/?page_id=5